2012-08-12 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
Acer Aspire 4730G Driver For window7(32bit and 64 bit)
​မေး ​တော​သား​လေးး​အစ်​ကို​ရေ ​ကျွန်​တော့်​ကို ​တ​စိတ်​လောက် ​ကူ​ညီ​ပေး​ပါ​ဦး။ ​တစ်​ခြား​တော့ ​မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး laptop driver ​ပါ ​ကျွန်​တော့် laptop ​က Acer aspire 4740 G ​ပါ။ window7​အ​တွက် ​ရ​ရင် ​ကူ​ညီ​ပေး​စေ​ချင်​ပါ​တယ်။ ​ကျွန်​တော့်​မှာ driver ​မ​ရှိ​လို့ ​ရွာ​လည်​နေ​ပါ​တယ်။
​ဖြေး​ညီ​လေး​ရေ ​ရွာ​လည်​ရင်​တော့ ​ဗိုက်​ဝ​တာ​ပေါ့။ ​တ​အိမ်​တက်​ဆင်း ​ထ​မင်း​ဖိတ်​ကျွေး​တော့ ​ထ​မင်း​ဖိုး ​မ​ကုန်​တော့​ဘူး​ပေါ့။ ​တစ်​ချို့​တွေ​က ​တော​သား​လို့​ပြော​ရင် ​နာ​ကြ​တယ်။ ​ကျွန်​တော်​က​တော့ ​မ​နာ​ပါ​ဘူး။ ​ညီ​နေ​မင်း​က ​တော​သား​လား ​မြို့​သား​လား ​ဆို​ရင်​တော့ ​တော​လည်း​မ​ဟုတ် ​မြို့​လည်း​မ​ဟုတ် ​က​လို့​ပဲ ​ဖြေ​ရ​မှာ​ပါ။ ​ကျွန်​တော့် ​ချက်​မြှုပ်​ဇာ​တိ​ကို ​သိ​တဲ့​သူ ​ဝဘ်​ဆိုက်​ထဲ​မှာ ​ဟို​တစ်​လော​က​မှ ​သိ​လိုက်​ရ​တဲ့ ​ညီ​လေး​တစ်​ယောက် ​ရှိ​ပါ​တယ်။ ​သူ​ပဲ​သိ​ပါ​တယ်။ ​ဘယ်​သူ​ပဲ​ဖြစ်​ဖြစ် ​ကို့​မွေး​တဲ့​နေ​ရပ်၊ ​ချက်​မြှုပ်​ထား​ရာ ​ဒေ​သ​ကို ​လွမ်း​တတ်​တ၊ ​တမ်း​တ​တတ်​ကြ​ပါ​တယ်။ ​မိ​ခင်​နိုင်​ငံ​ကြီး​ရဲ့ ​အ​ဝေး​မှာ ​သွား​အ​လုပ်​လုပ်​နေ​ရ​တဲ့ ​မိ​ဝေး​ဖ​ဝေး ​ညီ​လေး/​ညီ​မ​လေး​များ​ကို​လည်း ​မိ​ခင်​နိုင်​ငံ​ကြီး​မှာ ​အ​မြန်​ပြန်​လာ​နိုင်​ပါ​စေ​လို့ ​ကျွန်​တော် ​ဆု​တောင်း​လိုက်​ပါ​တယ်။ ​အ​ရင်​က ​လူ​ကြီး​ဖြစ်​နေ​တဲ့ ​ကျွန်​တော် ​အ​ခု ​က​လေး​ပြန်​ဖြစ်​နေ​ရ​တယ်​ဗျာ။ ​ဘာ​ပဲ​ဖြစ်​ဖြစ် ​အ​မေ​ဘေး​နား​ရှိ​တော့ ​အား​တက်​တာ​ပေါ့။ ​ဟုတ်​ဖူး​လား။
AHCI Intel SATA AHCI Driver 10.1.2.1004
Audio Conexant Audio Driver 8.54.6.0
Bluetooth Atheros Bluetooth Driver 7.2.0.60
CardReader Realtek Card Reader Driver 6.1.7601.85
TouchPad ELANTECH Touchpad Driver 8.0.6.0
TouchPad Synaptics Touchpad Driver 15.2.9.0
USB Renesas USB Driver (3.0) 2.0.26.0
VGA NVIDIA VGA Driver (Phyx) 9.10.0514
VGA NVIDIA VGA Driver 8.17.12.6721
Wireless LAN Broadcom Wireless LAN Driver 5.100.235.19
Wireless LAN Intel Wireless LAN Driver 14.0.1.2
Wireless LAN Realtek Wireless LAN Driver 1005.12.0105.2011
BIOS Acer BIOS 1.10
BIOS Acer BIOS 1.08
BIOS Acer BIOS 1.07
BIOS Acer BIOS 1.04
BIOS Acer 1. Updates all logo resolution to 1024 * 768. (more…) 1.05
BIOS Acer 1. Updates nVidia N12PGS VBIOS to 70.08.45.00.3E for P5LJ0/P5LS0. (more…) 1.03
BIOS Acer Adds 1.5 sec delay in ZPODD _DSM for Super Multi HLDS(GU40N), The ODD need 1.5 sec to wake up after power supply. 1.02
2012 ​အ​တွက် ​အ​ကောင်း​ဆုံး recovery software ​ဆု​ရ Stellar Phoenix Windows Data Recovery Pro.5.0
2012 ​ခု​နှစ်​အ​တွက် ​အ​ကောင်း​ဆုံး​နှင့် ​လူ​ကြိုက်​အ​များ​ဆုံး Data backup recovery software ​ဆု ​ရ​ရှိ​သည့် Stellar Phoenix Windows Data Recovery Pro 5.0 ​ကို ​ကျွန်​တော် ​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​ပြီ။ Serial number ​နှင့် Software ​များ​ကို ​ခွဲ​ပြီး​တော့ ​တင်​ပေး​ပါ့​မယ်။ ​အ​ဆင်​ပြေ​လိမ့်​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ်။ ​ဘာ​လို့​ကောင်း​တာ​လဲ ​ဓါတ်​ပုံ​တွေ Data ​တွေ​ကို ​ဘယ်​လောက် % ​အ​ထိ ​ယူ​နိုင်​သ​လဲ ​ဆို​တာ​က​တော့ ​ကိုယ် ​ကိုယ်​တိုင် ​လက်​တွေ့ ​စမ်း​ကြည့်​လိုက်​ပေါ့။ ​ဖျက်​ထား​တာ​ကို ​မ​စမ်း​ချင်​ဘူး​ဆို​ရင် format ​ရိုက်​ပြီး ​ပြန်​ယူ​ကြည့်​လိုက်​ပါ။ ​ဒါ​ဆို​ရင် ​သိ​နိုင်​ပါ​လိမ့်​မယ်။ ​လက်​တွေ့​သိ​ဖို့ Hard disk ​ကို​တော့ format ​ရိုက်​ပြီး ​မ​စမ်း​ပါ​နဲ့ Data ​များ​ရင် ​နည်း​နည်း ​ဖိုင်​များ​လို့ ​ကြာ​နိုင်​ပါ​တယ်။ ​အဲ့​ဒါ​ကြောင့် flash drive (or) memory stick ​ကြိုက်​သ​လို​ခေါ်​ပါ။ ​အ​လွယ်​နည်း​နဲ့ flash drive ​လို့​ပဲ​ခေါ်​ရ​အောင်​ပါ။ flash drive ​တွေ​နဲ့ ​စမ်း​ကြည့်​လိုက်​ပါ။ ​မ​ရှိ​မ​ဖြစ် ​ဆောင်​ထား​သင့်​တဲ့ software ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ​လို​ချင်​ရင် ​အောက်​မှာ Download ​လုပ်​ယူ​လိုက်​ပါ။
(​ဒါ​နဲ့​စ​ကား​မ​စပ် ​လက်​တို့​ပြီး​တော့ ​သ​တိ​ပေး​ပါ​ဦး​မယ်. laptop ​ပဲ ​ရောင်း​ရောင်း၊ Desktop ​ပဲ​ရောင်း​ရောင်း ​အဲ့​ကွန်​ပျူ​တာ​ထဲ​မှာ ​အ​ရေး​ကြီး​တာ​တွေ ​ထည့်​ခဲ့​ဖူး​တယ်​ဆို​ရင်​တော့ ​အ​ကောင်း​ဆုံး​က ​အဲ့​အ​ထဲ​က Hard disk ​ကို ​မ​ရောင်း​ပါ​နဲ့။ ​ဖြစ်​နိုင်​ရင်​တော့ ​အ​သစ်​သာ ​တစ်​လုံး ​ဝယ်​ထည့်​ပေး​လိုက်​ပါ။ ​အဲ့​ဒါ ​ကိုယ့်​အ​တွက် ​အ​န္တ​ရယ်​ကင်း​ပါ​တယ်။ ​အ​ဆင်​ပြေ​နိုင်​ပါ​စေ​ဗျာ။ )
​ပါ့စ်​ဝါ့ဒ်​က​တော့ ​ကျွန်​တော့် ​အီး​မေးလ်​လိပ်​စာ​ပါ ..
TeamViewer Corporate v7.0.12541.0 (Full version)​နော်
​ည​တုန်း​က​တည်း​က ​တင်​ပေး​မ​လို့​ပါ​ပဲ.. ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​အင်​တာ​နက် speed ​က download speed ​က ​မြန်​ပြီး upload speed ​က ​အ​ရမ်း​နှေး​နေ​လို့ ​တိုင်​ပတ်​သွား​တယ်။ ​ခု​လည်း ​ဒေါင်း​တာ​က​တော့ ​ရ​တယ်။ ​ပြန်​တင်​ဖို့ ​ခက်​နေ​လို့ ​ဖိုင်​ဆိုက်​သေး​သေး​နဲ့ ​အ​သုံး​ဝင်​တာ​တွေ ​တင်​ပေး​ပါ့​မယ်။ ​ဖိုင်​ဆိုက်​ကြီး​တာ​တွေ​လည်း ​တင်​ပေး​ဖို့​စီ​စဉ်​ထား​ပါ​တယ်။ serial number ​အ​တွက်​က​လည်း ​စီ​စဉ်​ပေး​နေ​ရ​တော့ ​မ​အား​ဘူး​ဖြစ်​သွား​တယ်။ software ​တော်​တော်​များ​များ​ကို serial number ​တွေ​နဲ့​ချည်း​ပဲ A ​က​နေ Z ​အ​ထိ A ​ဆို​ရင် A ​နဲ့​စ​တဲ့ software ​တွေ​ပေါ့ ​ဥ​ပ​မာ A ​ကို​နှိပ်​တာ​နဲ့ adobe photoshop ​တို့ Adobe Dreamweaver ​တို့၊ ​စ​သ​ဖြင့်​ပေါ့​လေ ​သူ့ version ​အ​လိုက် ​တစ်​ခါ​တည်း ​ပါ​လာ​မှာ​ပါ။ ​အား​လုံး​အ​ဆင်​ပြေ​ကြ​လိမ့်​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ်။ password ​က ​ကျွန်​တော့် ​အီး​မေလ်း​လိပ်​စာ​ပါ။ ​လိုင်​စင် version ​က​တော့ ​မ​လုပ်​တတ်​သူ​များ ​ဝဘ်​ဆိုက်​ညာ​ဖက်​အ​ခြမ်း​မှာ ​လိုင်​စင် ​ဗား​ရှင်း​ဖြစ်​အောင် ​လုပ်​နည်း​ကို video ​နဲ့ ​ရှင်း​ပြ​ပေး​ထား​ပါ​တယ်။